Dust Settle 3D အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（56.3MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Dust Settle 3D-Infinity Space Shooting Arcade Game
In အများဆုံးအာကာသသေနတ်ပစ်ဂိမ်းကို tr စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံး🚀 3D Space Exploration Game🏆🏆ပထမဆုံးအာကာသစွန့်စားမှု Arcade Game🥇
🚨🚨 "သတိပေးချက်! အာကာသဂြိုလ်သားကျူးကျော်သူများတိုက်ခိုက်! 👾သတိပေးချက်! ဖုန်စီးနင်းမှု! ၎င်းသည် Alien Invasion ဖြစ်သည်! Code Red
Red Red! DSpace Dust သည်နဂါးငွေ့တန်းတစ်လျှောက်ပျံ့နှံ့သွားပြီးစနစ်အားလုံး၏အဓိကခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်လာသည်။ နဂါးငွေ့တန်းအားကျူးကျော်သူများနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကာကွယ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ the
! Shoot fing the "Shoot Shoot Shoot Shoot your your your Shoot your your your your your your your Shoot Shoot Shoot Shoot Shoot your your Shoot your your your your your your your your your your your your your your your your your your your your your your your your your your Shoot your Shoot your Shoot your Shoot your Shoot your your your your your your your your your your your Shoot your Shoot your Shoot your Shoot your Shoot your your your Shoot လက်ခြေဆန့်ကျင်ဖြင့်ရိုက်။ ရိုက်စေလော့ '' 💥🔫
🚀 Dust Settle 3D - Infinity Space Shooting Arcade Game သည်အခမဲ့အာကာသသေနတ်ပစ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာကာသဖုန်အမျိုးမျိုးကိုဖျက်ဆီးရန်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်ဖြင့်ထိပုတ်ပါ။ အဆိုပါနဂါးငွေ့တန်းဖုန်မှုန့်ထိမရ, ရှောင်နှင့်သင်၏အာကာသယာဉ်နှင့်အတူသူတို့ကိုရိုက်ကူးမထားပါနဲ့။ သင်၏အာကာသယာဉ်ကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်လက်နက်တပ်ဆင်ရန်သင်၏အာကာသယာဉ်၊ လက်နက်များနှင့်ဒင်္ဂါးများကိုစုဆောင်းရန်သတိရပါ။ မကောင်းသောဂြိုလ်သားအင်အားစုများကိုအနိုင်ယူရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တိုက်လေယာဉ်ကိုစီးပါ။
ကွဲပြားခြားနားသောအာကာသဂြိုလ်သားကျူးကျော်မှုများ👽👽 the နဂါးငွေ့တန်းတစ်ဝိုက်တွင်လှည့်လည်ကြည့်ရှု။ လူနေထိုင်ရာဂြိုလ်များကိုကျူးကျော်ရန်အခွင့်အလမ်းရှာဖွေသည်။ နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုလုံးသည်အာကာသစစ်မြေပြင်တွင်ရှိနေသည်။ Galactica ၏တပ်မှူး Caption Falcon သည်သူ၏အထက်တန်းလွှာအာကာသအသင်းကိုစုဆောင်းနေသည်။ Falcon အသင်းနှင့်ပူးပေါင်းပြီးရန်သူများကိုအဝေးမှ Rim မှကာကွယ်ရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါ။
"သူတို့ကိုတက်ပစ်ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောလက်နက်များဖြင့်သင်၏အသင်းကိုအဆင့်မြှင့်ပါ။ ရန်သူများမှတဆင့်ပေါက်ကွဲပါ!"
Dust Settle isaစွန့်စားမှုများစွာနှင့်အတူအာကာသသေနတ်ပစ်ဂိမ်း：
ari အမျိုးမျိုးသောဖုန်: ပုံမှန်ဖုန်၊ Elite ဖုန်၊ Mini Boss၊ စူပါသူဌေး။
F 3D Fighter Aircraft & Spaceships: သင်္ဘောတိုင်းတွင်ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ရှိသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်များဖြင့်သင်၏တိုက်လေယာဉ်များနှင့်အာကာသယာဉ်များသည်ပိုမိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောစွမ်းရည်များကိုဖွင့်နိုင်သည်။
🎮 Amazing Space Gaming Experience: ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများမှကွဲပြားခြားနားသောစူပါပါဝါကိုရယူပါ။ သင်၏ကျူးကျော်သူနှင့်မြေမှုန့်အားလုံးကိုချက်ချင်းဖျက်ဆီးနိုင်ရန်သင်၏ wingman သို့မဟုတ်စူပါမီးအားပစ္စည်းများမှမီးအထောက်အပံ့ရယူနိုင်သည်။
Ⓕမိတ်ဆွေ၏အကြံပေးချက် - အနီရောင် ဦး ခေါင်းခွံမှပစ္စည်းများကိုရှောင်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏စွမ်းအားနှင့်ခွန်အားကိုအားနည်းစေပြီးရန်သူများကိုပိုမိုဖျက်ဆီးရန်ခက်ခဲစေသည်။
-အက်ပလီကေးရှင်းမရှိသော ၀ ယ်ယူရန်လိုအပ်သည် - သင်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ပိုမိုကစားနိုင်အောင်ကစားနိုင်သည့်မျှမျှတတရှိသည်။ မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမျှမလိုအပ်သော်လည်းအက်ပလီကေးရှင်းပါဝါပစ္စည်းအချို့ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏အချိန်ကိုပိုမိုသက်သာစေလိမ့်မည်။
🎇ထူးခြားသော Visual Art: ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဂရပ်ဖစ်၊ စစ်မှန်သော 3D အာကာသယာဉ်နှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပေါက်ကွဲမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသင့်အား Galactica အချိန်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
to သင်မည်သို့ကစားရမည်နည်း။ dust ဖုန်မှုန့်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးရန်သူအားလုံးကိုသတ်ရန်သင်၏အာကာသယာဉ်ကိုရွှေ့ရန်သင်၏လက်ချောင်းကိုတွန်းပါ။
items သင်၏တိုက်လေယာဉ်များ၊ အာကာသယာဉ်များ၊ မီးစွမ်းအင်နှင့်လက်နက်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ပစ္စည်းများနှင့်ရွှေများကိုစုဆောင်းပါ။
နဂါးငွေ့တန်းသည်ဖရိုဖရဲ၊ အန္တရာယ်ရှိပြီးသတ္တဝါများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုဖယ်ရှားပြီးနဂါးငွေ့တန်းသို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရယူရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ ယခုသင်၏တိုက်လေယာဉ်ကိုရွေးချယ်ပြီးသင်၏အာကာသယာဉ်ကိုပြင်ဆင်ပါ။ Galaxy ၏ငြိမ်သက်မှုကိုကာကွယ်ရန်!
Motive, easy and ဆွဲဆောင်မှုရှိသော gameplay ။ ပျော်စရာကောင်းပြီးကစားရန်လွယ်ကူသည်၊ ဘယ်နေရာမဆိုအချိန်မရွေးအာကာသဖုန်များကိုဖျက်ဆီးသည်။ သင့်ရဲ့အားလပ်ချိန်များထဲကအပျော်ရွှင်ဆုံးရ! အကယ်၍ သင် Ace Squad၊ Galagtica, တိုက်စစ်မှူးများဖြစ်ခဲ့လျှင်သင်သည်ဤအာကာသသေနတ်သမားကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
✊🏻 Play Dust Settle 3D! Falcon ၏အာကာသsquad🦅တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ပါ။ Galaxy ကိုကျူးကျော်သူများနှင့်အာကာသမှဖုန်မှကာကွယ်ပါ။
your သင်၏သမာဓိနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုကိုပြပါ။ မဆိုင်းမတွဘဲဂလက်ဆီကိုသိမ်းဆည်းပါ။
ပြီးပြည့်စုံသောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးဂန္ထဝင် Arcade ဂိမ်းတွင်တိုက်ပွဲများနှင့်တိုက်ပွဲများကိုပျော်မွေ့ပါစေ။ ဒီ Galaxy ကဂြိုလ်သားကျူးကျော်သူများနှင့်အာကာသမြေမှုန့်များကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်အဆုံးမဲ့အာကာသပတ်ပတ်လည်၌လှည့်လည်ကြည့်ရှုပါ။
ဘာအသစ်လဲ Dust Settle 3D-Infinity Space Shooting Arcade Game 1.78
Dust Settle 3D-Infinity Space Shooting Arcade Game Gameplay
Dust Settle 3D-Infinity Space Shooting Arcade Game | gameplay level 201-203
#DUST SETTLE 3D INFINITY SPACE SHOOTING ARCADE GAMEPLAY || SPACE SHOOTING NEW game video tutorial
Dust settle 3D Infinity space shooting Arcade Game level 20
Dust settle 3D Infinity space shooting Arcade Game level 21
Dust Settle 3D - Galaxy Attack 1.76
Dust Settle 3D - Galaxy Attack 1.71
Ba sai Ba sai
Nay Lin Hpaan